Dr. Tint Swe's Writings: Thai-Burma ထိုင်းနဲ့ မြန်မာ ယှဉ်ကြည့်တာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မကြာခင်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံကို နောက်တခေါက်ထပ်သွားပါမယ်။ ဒေါ်စုခရီးစဉ်မှာ ဘာတွေ မျှော်လင့်ကြသလည်း တယောက်တမျိုးတော့ ထင်ကြေးပေးနေကြတယ်။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကနေ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေး အစီအစဉ်မှာ အတိုင်းအတာတခုထိ ဝင်ပါစရာအကြောင်းရှိတယ် ထင်ပါတယ်။
ထိုင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးကိုယှဉ်လေ့လာရင် စိတ်ဝင်စားရာကောင်းတာတွေရှိတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၁၉၄၁ မှာ ဂျပန်ကသိမ်းတယ်။ ၁၉၆၅-၁၉၇၁ ဗီယက်နမ်စစ်အတွင်းမှာ အမေရိကန်ကိုကူညီခဲ့တယ်။ ၁၉၆၄-၁၉၇၂ လာအိုနဲ့ စစ်ဖြစ်တယ်။ ၁၉၉၇ မှာ ပဌမဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ထွက်လာတယ်။ တပ်ဆင်အစိုးရ ၂ဝဝ၁ ရွေးကောက်ပွဲအရ တက်လာတယ်။ ၁၉-၉-၂ဝဝ၆ မှာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်။ တပ်ဆင် ထွက်ပြေးရတယ်။ ၃-၇-၂ဝဝ၈ မှာ သူ့နှမယင်းလတ် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တယ်။ ၂ဝ၁၃-၁၄ အတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တယ်။ ၇-၅-၂ဝ၁၄ မှာ ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံးကနေ ယင်းလတ်အစိုးရကို ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး ကြားဖြတ်အစိုးရနဲ့ အခုစစ်အစိုးရတက်လာတယ်။ (တပ်ဆင်) ဟာ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးတယ်။ သူဟာတိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုတလွဲသုံးပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာသူဖြစ်တယ်။
သူတို့ဆီမှာ မီဒီယာကလွတ်လပ်မှု ရှိနေတာကြာပြီ။ တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်မှာတော့ သူတို့ကအများကြီး ကံကောင်းတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ မွတ်ဆလင်ခွဲထွက်ရေးတခုသာရှိတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရော ထိုင်းပါ အတော်ကံဆိုးကြတယ်။ ပညာတတ်နဲ့ တောသူတောင်သားတွေရောရှိတာတွေက ဆင်တူတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ သာတာတခုက တောနေလူထုဟာ ထိုင်းမှာလို မဲကိုငွေနဲ့ရောင်းစားသူ နည်းတယ်။ (တပ်ဆင်) ပြန်အရွေးခံလည်း နိုင်အုံးမှာပဲ။ ထိုင်းတောသားတွေက မြန်မာပြည်တောနယ်ကလူတွေလောက် နိုင်ငံရေးအသိမရှိကြဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆိုက်ကားဆရာတွေလို ထိုင်း (တုပ်တုပ်) ခေါ်သုံးဘီးသမားတွေက အားမကိုးရဘူး။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဘုရင်စနစ် ခုထိရှင်သန်ဆဲဖြစ်လို့ အရေးအကြောင်းဆို ဘုရင်ကိုအားကိုးနိုင်တာမျိုးရှိတယ်။ ထိုင်းမှာလည်း ကျွန်တော်တို့လိုပဲ စစ်တပ်ကနေ အာဏာဝင်ယူတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်ကနေအာဏာသိမ်းတာ ခုထိ အကြိမ် (၂ဝ) တိတိရှိပြီ။
1. June 24, 1932 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
2. June 20, 1933 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
3. October 11–23, 1933 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
4. August 23, 1935 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
5. January 29, 1939 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
6. November 7, 1947 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
7. 1949 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
8. June 29, 1951 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
9. November 29, 1951 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
10. September 21, 1957 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
11. October 20, 1958 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
12. November 18, 1971 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
13. February 1976 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
14. October 6, 1976 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
15. October 20, 1977 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
16. 1981 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
17. 1985 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
18. February 24, 1991 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
19. September 19, 2006 ထိုင်းစစ်အာဏာသိမ်း။
20. May 22, 2014 လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်လုပ်နေသူ။
ထိုင်းမှာစစ်အာဏာသိမ်းတာ ကာလတော့ မြန်မာပြည်မှာလို မကြာပါ။ ခဏခဏဆိုတော့ ဝမ်းကိုက်ရောဂါလိုပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက ကာလဝမ်းလျှောသလိုပဲ။ သေတဲ့သူသေ မသေယုံတမယ်ကျန်သူကကျန်။ အခု ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာပြည်က စစ်တပ်တွေ ဘယ်ကိုဦးတည်နေကြသလည်း။ နိုင်ငံရေးသမားတွေညံ့လို့ စစ်တပ်ကအာဏာယူတာလို့ ပြောတဲ့ နိုင်ငံရေးသီအိုရီက မမှန်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ လူထုညံ့ရင်လည်း စစ်တပ်ကအာဏာရတယ်။ နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာ လူထုနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ တော်မှတတ်မှသာ စစ်တပ်လည်း ဂုဏ်သိက္ခာပြန်တက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲတော့ သုံးဦးသုံးဖလှယ် တော်ကြရပါလိမ့်မယ်။